Ciidamada maamulka galmudug oo dhaqdhaqaaq ciidan kawada deegaanka camaara – STAR FM SOMALIA
Ciidamada maamulka galmudug oo dhaqdhaqaaq ciidan kawada deegaanka camaara
Wararka ka imaanaya Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee Maamulka Ximan iyo Xeeb, ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug, ay saaka wadaan dhaq-dhaqaaq ciidan oo ku wajahan deegaanka Camaara oo Shabaab ay hada ku sugan yihiin.
Dhaq-dhaqaaqyadan ciidan oo ilaa shalay ay wadeen ciidamada Maamulka Galmudug, ayaa wararka waxa ay sheegayaan in uu dhamaaday Diyaargaroowga ciidanka, islamarkaana saaka ay ku dhaqaaqayaan deegaankaasi.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Galmudug, ayaa sheegay ciidamada inay diyaar yihiin, ayna ku wajahan yihiin Deegaanka Camaara oo ka tirsan Gobolka Mudug, ayna qabsadeen Shabaab.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carabeey) ayaa Khamiistii sheegay ciidamada Galmudug inay wadaan dhaq-dhaaq ciidan oo ay ku wajahayaan deeganada Shabaabka ay ka joogaan labada Gobol ee Maamulkaasi uu ku magacaaban yahay.
Ciidamada Maamulka Galmudug oo dhawaan loo qaybiyay Mushaaraadkooda, ayaa xilligan waxaa ku jirta dhiiranaan ku aadan inay la dagaalamaan Shabaabka dhibaatada ka wada deeganada Maamulka Galmudug.
Al Shabaab ayaa dhawaan la wareegay Deegaanka Camaara ee Koonfurta Gobolka Mudug, waxaana damaca Shabaab uu yahay inay sii gaaraan deegaano kale oo ka tirsan Gobolka Mudug.
Booliska kenya oo damaadan ku siidaayey wadaado ku xirnaa magaalada mandheera
Xildhibaanadii keenay mooshinka madaxweynaha ka dhanka ahaa oo wali mooqifkoodii ku dhagan